ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: ဓာတုအဆိပ်သင့် မီးလောင်ဒဏ်ရာရ သံဃာတော်များ နိုင်ငံခြားတွင် ဆေးကုသမှု ဆက်လက်ခံယူနိုင်ရေး ၀ိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းပေးကြပါ (ပေးစာ)
Posted by ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ at 12:39 AM
တခြား မလိုတဲ့နေရာတွေမှာ သုံးစွဲအကုန်အကျခံခြင်းဟာ ဘာမှ မထိရောက်သလို သဲထဲရေသွန်ဖြစ်နေပါတယ်။ အခုလို တကယ်လိုအပ်တဲ့နေရာမှာ ပေးကမ်းထောက်ပံ့လှူဒါန်း ခြင်းက အလှူခံရော လှူသူပါ ပိုပြီးထိရောက်ပါတယ်။
နိုင်ငံခြားသွားပြီး ဆေးကုဖြစ်လျှင် မိမိ တတ်အားသမျှ လှူဒါန်းဘို့ စိတ်ကူးရှိပါတယ်။
ဒီအတိုင်းသာမှန်၇င် အန်တီစုအနေနဲ့ေ၇ငုံနှုတ်ပိတ်မနေပါနဲ့ခင်ဗျာ။ ထိထိေ၇ာက်အေ၇းယူဆောင်၇ွက်မှုပေးဘို့ လေးစားစွာတောင်းဆိုပါတယ်။ ။
ရဲခွေးတွေ တရုပ်ဖင်စုပ်ကောင်းတွေ မင်းးတို့အဖေ အမေ သိန်းစိန်သွားလုပ်ပါလား လူမဆန်တဲ့ကောင်းတွေ
မင်းသတင်းမှန်ရင် လူမှူရေးအသင်းတွေ နဲ့ nld ကလူတွေ ၈၈ တွေကပြောမှာပါ မဟုတ်ဘဲနဲ့ ပွဲဆူအောင် မလုပ်ပါနဲ့
ဘုန်းဘုန်းတို့က လွှတ်တော်မှာ ၅၀ ရာနှုန်း ပါခွင့်ပေးရမယ် ပြီးရင် ဘာသာရေး တပ်ဖွဲ့ပေးရမယ် နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ သူတွေလာရင် ဘုန်းဘုန်း တို့ခွင့်ပြုမှ လုပ်ရမယ် အဲဒါတွေရမှ သပိတ်လှန်မယ် ဟဲဟဲ
ct ပြောတာကို အပြည့်အဝ ကို ထောက်ခံတယ်ဟေ့
UNION OF MYANMAR ECONOMIC HOLDINGS LTD. AND CHINESE WAN BAO COMPANY HAVE FULL RESPONSIBILITY TO TAKE CARE OF THE INJURED SANGAS. THEY MUST TREAT ALL THE SANGAS UNTIL ALL FULLY RECOVERED AND DISCHARGE FROM HOSPITALS. THEY HAVE POWER AND MONEY. THEIR HOLDINGS IS TOO BIG AND IT EARN A LOT OF MONEY EACH YEAR. HOWEVER, THEIN SEIN ANSWERED AT AN INTERVIEW WITH BBC THAT U PAING HAS ONLY TWO MINING BUSINESSES. US AND EEC COUNTRIES HAVE BEEN DOUBLE CROSSED BY THE MILY. REGIME AND IT IS NOT TOO LATE TO ABORT THEIR MISSIONS.
အရမ်းမိုက်ရိုင်းတဲ့ဆရာဝန် ပဲ အပြင်မှာတွေ့ရင်မင်း အသက်ဖက်နဲ့ထုပ်ထားတော့ ကွာ
aye kyaw said...
နှစ်ရှိတဲ့ရဲတပ်ကြပ်ကြီးတစ်ယောက်ပါ။ကျွန်တော်နောက်(၅)နှစ်ဆိုရင်လုပ်သက်ပင်စင်ယူလို့ရပါပြီတပ်ကြပ်ကြီးလုပ်သက်လည်းဘားဆုံးနေလို့မျော်လင့်စရာနှစ်တိုးလဲမရှိတောပါဘူး၊ကျွန်တော်တို့ရဲတပ်ဖွဲ့မှာတပ်ကြပ်ကြီးလုပ်သက်ဘယ်လောက်မှအရာခံ အဆင့်တိုးပေးတာပါလဲ သတ်မှတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းချက်တွေကိုသိပါတယ် စာထဲမှာ ရှိတာဖတ်ဖူးလို့ပါအပြင်မှာတော့အရာခံ အဆင့်တိုးစာမေးပွဲတစ်ခါမဖြေဘူးပါဘူးပင်စင်မယူခင်နောက်(၅)နှစ်မှာလဲဖြေရမယ်မထင်ပါဘူးရှင်းတတ်ရင်ဘာကြောင့်လဲလို့ရှင်းပြပေးကြပါလားခင်ဗျာ